Tag: mutengi kutenga sarudzo | Martech Zone
Tag: mutengi kutenga sarudzo
Svondo, Gunyana 27, 2015 China, November 5, 2015 Douglas Karr
Isu tanga tichinyora nekutaura zvakawanda nezvekupiwa uye danho rekutenga sezvo riine chekuita nekugadzirwa kwemukati. Kuzivikanwa kwechiratidzo kunoita basa rakakosha; pamwe kupfuura zvaunofunga! Sezvo iwe uchiramba uchivaka ruzivo rwechako chiratidzo pawebhu, ramba uchifunga kuti - nepo zvirimo zvingangotungamira nekukanganisa - zvinogona kutungamira mukuzivikanwa kwechiratidzo. Sezvo huvepo hwako hunowedzera uye zita rako rinova chinhu chakavimbika,